စာပေ နှင့်အနုပညာ ကိုခံစားတက်သူများအတွက် ဖန်တီးပါသည်.....
My Task Manager is greyed out and not enabled. How can I enable it?
Thu Jan 01, 2009 12:49 am by Htinkyaw
အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပုံအတိုင်း task bar ကို right click ထောက်တဲ့အခါမှာ
task Manger မပေါါ်လို့ရှိခဲ့လို့ ရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို ဖြေရှင်းရအောင်....
Lover of Literature :: စာပေချစ်သူအဖွဲ့ဝင်များ၏ခံစားမှုရသများ :: ဟာသများ
Htinkyaw on Thu Jan 01, 2009 12:34 am
Jump to: Selectaforum||--အုပ်ချုပ်သူများ၏ ပန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းများ| |--အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အမှာစာများ| |--အခက်အခဲများ ကူညီနိုင်ရန်| |--အဖွဲ့ဝင်များ မိတ်ဆက်ရန်| |--ကျွန်တော်ကတော့.....| |--ကျွန်မကတော့....| |--ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတအကြောင်းဆွေးနွေးရန်|--ဘာသာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်| |--ဆုးံမသြ၀ါဒ လင်္ကာများ| |--နည်းပညာဆွေးနွေးချက်များ| |--Window နဲ့ပတ်သက်သမျှ| | |--ကွန်ပျူတာ ပြဿနာလေးတွေကိုဆွေးနွေးရန်| | | |--Internet and Email| |--စာပေချစ်သူအဖွဲ့ဝင်များ၏ခံစားမှုရသများ| |--ကဗျာခံစားမှုလေးတွေ| |--နှစ်သက်မိသော ကဗျာလေးများ| |--ခံစားမှု စာသားလေးတွေ| |--၀တ္တု နှင့်ဆောင်းပါး| |--ဟာသများ| |--တိုးတက်ရေး အသိအမြင်များ| |--စကားစုလေးများ| |--ဆောင်းပါးများ| |--စာကြည့်တိုက်|--သတင်းနှင့် ဗဟုသုတ|--အားကစားအကြောင်း
» lay phyu ရဲ့ စာမျက်နှာတဆယ့်ငါးတောင်းဆိုချင်လို့ပါ
Thu Jul 16, 2009 12:05 am by nayhtooaung1992
Thu Jul 09, 2009 9:01 am by nayhtooaung1992
» ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးမစကား
Sat Jan 03, 2009 1:54 am by Htinkyaw
» ကံ - ကံ၏အကျိုး
Thu Jan 01, 2009 9:12 am by Htinkyaw
» ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင်
Thu Jan 01, 2009 9:11 am by Htinkyaw
Thu Jan 01, 2009 9:03 am by Htinkyaw
Thu Jan 01, 2009 8:58 am by Htinkyaw
» ခံစားမိသော အချစ်ဒဿနလေး
Thu Jan 01, 2009 8:55 am by Htinkyaw
» တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ် မထားပါနဲ့
Thu Jan 01, 2009 8:52 am by Htinkyaw
Most users ever online was 12 on Sat Jul 13, 2013 5:55 pm
You are listening : YAMC
Visiter of country